Mayelana NATHI - Zhongnan Import and Export Co., Ltd.
I-Zhongnan Import and Export Co, Ltd. yasungulwa ngonyaka we-2011 futhi itholakala e-Yiwu, e-China, idolobha elidayisa umhlaba wonke elidumile emhlabeni. Le nkampani yakhiwa nguMnyango Wezokuhwebelana Kwangaphandle, uMnyango Wezincwadi kanye noMnyango Wokugcina Izindlu. Isebenza kakhulu kuwo wonke amabhizinisi ahlobene nokungenisa nokuthumela kwamanye amazwe, enikeza ukuhunyushwa kweSpanishi nesiNgisi, kanye nazo zonke izinqubo zokuhweba zangaphandle zokuthengwa kwangaphandle, ukuhlolwa, nokuthunyelwa eChina. Ukuhambisana namakhasimende kuyo yonke inqubo yokuthenga kuzo zonke izifunda zaseChina, ukuqoqa nokugcina izimpahla, hlola isitayela nekhwalithi, ukuqinisekisa ikhwalithi yokuthengwa kwamakhasimende, nokusekela ukukhula kwamakhasimende ukufeza ukukhula okuhlangene.
Izinsiza zehhovisi, izesekeli, amathoyizi, izitolo, izinto zeholide, izipho zokudala, imikhiqizo kagesi, imishini, njll
Le nkampani ithobela umthetho "wobuqotho obusekelwe, idumela kuqala" kanye nensizakalo enhle, futhi isungule idumela elihle nedumela phakathi kosomabhizinisi bakwamanye amazwe nabahlinzeki. Ngemuva kweminyaka eyi-10 yentuthuko, kusukela kwikhasimende elilodwa lokuqala kuze kube manje, amakhasimende atholakala ePeru, eBolivia, eMexico, e-Argentina, eColombia nakwamanye amazwe amaningi aseNingizimu Melika.
Siyakwamukela ngokufudumele kusuka emhlabeni wonke ukuthi uhlanganyele nathi futhi sikhule ndawonye!
Le nkampani inethimba lokuthuthukiswa kobuchwepheshe lobuchwepheshe elinolwazi olucebile lobuchwepheshe kanye nesipiliyoni se-R & D esicebile emkhakheni wobuchwepheshe benethiwekhi nezokuxhumana, izicelo ezinkudlwana zemininingwane, kanye nethimba lezinsizakalo ezinekhwalithi enhle yokuhlinzeka amakhasimende kahulumeni asezingeni eliphakeme futhi asebenza kahle . Ithimba lenkonzo.
Le nkampani igxile ekuqiniseni ukwethulwa kwabasebenzi nokuqeqeshwa nokubambisana kwabasebenzi abakhona. Ngokuya ngohlelo lwentuthuko yenkampani, inkampani iyaqhubeka nokuheha futhi yenyuse abasebenzi bezobuchwepheshe enkampanini, ukuze inani labasebenzi bezobuchwepheshe benkampani liqhubeke nokukhula, ligcine lifinyelele ngaphezu kuka-50%. Ngasikhathi sinye, iqinisa ukuqeqeshwa kwabasebenzi abakhona. Ngokuya ngezidingo zenkampani nokuzithuthukisa, inkampani inika abasebenzi amathuba okuqeqeshwa. Okunye ukuqhubeka nokuthuthukisa amakhono obuchwepheshe ngokufunda nokusebenza ngaphakathi kwenkampani, futhi ngasikhathi sinye ukuqhuba ukuqeqeshwa kwangaphandle kwabasebenzi abaqeqeshiwe. Ukwenza ngcono amakhono abo wokuthuthuka kwezobuchwepheshe. Ukusekelwa kuhlinzekwa nakwezemfundo. Ngasikhathi sinye, ihlinzeka ngenye indlela enhle maqondana nomholo, ezezindlu nenhlalakahle, futhi yamukela amathalente okujoyina inkampani.
Ngemuva kweminyaka eyishumi yokuqongelela neminyaka eyishumi yentuthuko, inkampani inamakhulu ezinkulungwane zamakhasimende. Ngenkathi isathuthukisa ibhizinisi layo eliwumgogodla, inkampani isheshisa uguquko lwayo, isheshisa ukuthuthuka kwayo okuhlukahlukene, futhi yakha ngenkuthalo ipulatifomu yobuchwepheshe be-e-commerce ehlangabezana nezimpawu zomkhakha wesevisi yanamuhla
Sigxile ekuhlolweni komkhiqizo, ekuqoqweni kolwazi nasekuqondisweni kwemakethe, ukunikela ngesampula, ukuhambisana ne-oda, ukulandelwa kwe-oda, ukulawulwa kwekhwalithi, ukuvikeleka kwenkokhelo, ukugcinwa kwempahla, ukuthunyelwa kanye nemibhalo efanele yokuthekelisa eyenza njll.Sinabasebenzi abaqeqeshiwe ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ethu ngqo xhuma amafektri ukwenza inzuzo yakho ikhuliswe.